Lisitry ny Top Museums any Amerika Afovoany - Fizarana 1
Isaky ny mandeha ianao, raha tianao ny hianatra momba ny firenena mitsidika anao dia manoro hevitra aho manao zavatra roa. Ny voalohany dia ny mandeha an-tanàn-dehibe. Ireo dia amin'ny ankapobeny amin'ny endriny amin'ny fiara fitateram-bivo, bisikilety na fitsangatsanganana. Ao amin'izy ireo ianao dia mianatra taonina momba ny tanàna, jereo ny mari-pamantarana manokana ary hahita zavatra mahafinaritra hatao.
Ny faharoa dia mitsidika ny sasany amin'ireo tranombakoka mendri-piderana. Raha mihaino tsara ianao ary maka fotoana hianarana momba izay asehony. Hahita ny fijerin'ny mpikaroka momba ny tantara sy ny kolontsain'ny toerana ianao.
Amerika afovoany dia tsy ny fiatoana. Any amin'ny firenena tsirairay dia hahita mozika an-taonany izay azonao atao hitsidihana vola kely ary ny hafa afaka maimaim-poana. Tohizo ny mivoatra mankany amin'ny finday dimy amin'ny tsara indrindra any amin'ny firenena tsirairay.
Musées ao Belize
1. Tranombakoka Belize - Ny tranobe misy azy dia nigadra taloha ary natsangana tamin'ny taona 1857. Nosakanan'ireo mpanao heloka bevava hatramin'ny taona 2002 izy io. Natokana ho an'ny fampiroboroboana sy fitehirizana ireo fitaovana ara-tsiansa sy ara-tantara. Misy fizarana izay ahafahanao mahita ny fomba niainan'ny voafonja. Ao amin'ny tanànan'i Belize ny tranombakoka.
2. Ny Galerie de San Pedro - Ity galerie ity no manana ny karazany indrindra amin'ny Arts & Crafts ao Belize. Misy sary hosotra maherin'ny 1.500 eto. Sora-baventy maro, sarontava, ary hamefoka mihitsy aza. Ankoatry ny toerana iray izay mampiseho ny sasany amin'ireo zavakanto tsara indrindra ao an-toerana, dia toy ny fivarotana iray izay ahafahanao mividy sasantsasany.
3. Museum Museum Natural History of Chaa - Ny tranom-bakoka dia anisan'ny Eco Lodge Luxury. Ao amin'ity tranom-bakoka ity, ireo mpitsidika dia mandray ny fizotry ny tantaram-pirenena voajanahary manerantany ary maneho hoe ahoana no nahatonga an'i Belize sy ny faritra nipetrahany ary lasa paradisa tropikaly amin'izao fotoana izao. Ao San Ignacio Belize izy io.
4. Trano Maya Center Mayan - Nosokafana tamin'ny 2010 ny tranombakoka mba hampiroboroboana ny kolontsaina Maya eo an-toerana. Ny mahasamihafa azy dia ny fahitana azy fa betsaka kokoa noho ny fampisehoana eny amin'ny rindrina. Ity dia tranombakoka velona dia ny mponina ao an-toerana no mampiseho ny lafiny lehibe amin'ny kolontsainy manokana. Amporisihina ny mpitsidika mba handray anjara amin'ny fampisehoana an-tanana.
5. Gulisi Garifuna Museum - Ao Dangriga no misy azy ary mankalaza ny kolontsain'ny Garifuna mahafinaritra sy miavaka. Nosokafana tamin'ny 2004 ny tranombakoka. Manolotra traikefa amin'ny multimedia izay hampiseho aminao izay rehetra ilainao hahafantarana an'ity vondron'olona mahafinaritra ity. Ny anaran'ilay vehivavy no nanorina ny Punta Negra tany amin'ny distrikan'i Toledo.
Musées ao Guatemala
Palais des Guatemala. AmslerPIX / Flickr / CC 2.0
1. Palacio Nacional de la Cultura - Io no trano lehibe maitso ao amin'ny Valan-tseranana Foiben'ny tanànan'i Guatemala. Io no sehatry ny fahefana ho an'ny firenena saingy tamin'ny taona 2001 dia nivadika ho tranombakoka izany. Na dia afaka mahita andiam-pandrefesana maro, monument, ary antontan-taratasy ara-tantara ianao dia mety hahita ny hevi-dehibe lehibe indrindra ho ilay rafitra tsara tarehy, ary asa tanana eo amin'ny rindrina.
2. Choco Museo - Toerana bitika ao Antigua Guatemala izay hianaranao ny momba ny ho Mayans mampiasa ny voankazo kakaô ary ny fomba fahatsapana maneran-tany amin'izao fotoana izao. Tsy zava-mahatalanjona akory izany, ny tena mahasarika dia rehefa tonga any amin'ny fampisehoana an-tànana izay ahazoanao ny voaniho kakaô ary manao ny asa rehetra ilaina mba hamadihana azy ao anaty sôkôla.
3. Museo Ixchel del Traje Indigena - Goatemala dia manana habetsahan'ny mponina Mayan monina ao. Miankina amin'ny faritra misy azy ireo amin'ny fiovan'ny akanjo nentim-paharazana. Izany dia fomba iray izay nahafahan'ny mpandresy Eoropeana hiteny hoe avy aiza ny tsirairay avy. Ankehitriny, dia zavatra mampiavaka azy amim-pireharehana izy ireo. Ny tranom-bakoka dia manana fahazoan-dàlana manokana ary maneho ny akanjon'izy ireo.
4. Museo Miraflores - tranom-bakoka ao an-tanànan'i Guatemala izay misy ny toerana misy ny tanànan'i Maya ao Kaminaljuyu. Ny faritra dia be mponina ary misy toeram-pivarotana an-jatony manodidina. Nandritra ny fanorenana ireo mpanao trano ireo dia nahita tranokala sy taon-trano sy voambolana izay voatahiry. Hatramin'ny 2002 dia misy sasany amin'izy ireo no aseho eto.
5. Museo del Ferrocarril - Tao anatin'ny andro voalohany, ny lamasinina sy ny lalamby dia ny milina ekonomika ara-toekarena ao Guatemala. Nampiasaina mba hitondra ny karazan-tsakafo manerana ny firenena. Hatramin'ny taona 2003 dia navadika ho tranom-bakoka ny toeram-piantsonan'ny tanànan'i Guatemala izay ahitanao ny sasany amin'ireo fiaran-dalamby farany ary hianatra ny zava-dehibe amin'ny toekarena ao an-toerana.
Museums any Honduras
1. Museo para la Identidad Nacional - Ho hitanao ity tranom-bakoka ity ao Tegucigalpa. Nosokafany voalohany tamin'ny taona 2006 ho toerana iray ahafahan'ny Hondurans sy mpitsidika hianatra ny tantaran'ny firenena. Ny tranobe misy azy dia fanintelony ao aminy, mahatalanjona! Izy io dia naorina tamin'ny taona 1882 tamin'ny fomba tsy ara-dalàna.
2. Museo de la Escultura - Io tranombakoka io dia hita ao amin'ny tranokala arabo fanta-daza Copán Ruinas. Ao anatin'izany no ahitanao sary sokitra maitso maherin'ny 3,000 nozaraina tamin'ny fampirantiana manodidina ny 59. Ao anatin'izany no ahitanao ny loko marevaka fahiny izay nampiasain'ny Maya tao amin'ny kanto azy ireo ary hianatra momba ny lanjany.
3. Museo de Antropología - Miorina ao San Pedro Sula ny tranombakoka ary nisokatra tamin'ny taona 1994. Ao amin'ny efitranony 20, ianao dia mianatra ny momba ny tantaran'i Columbia talohan'ny kolontsaina ary mandeha an-tongotra mandeha ara-potoana hatramin'ny andro maoderina. Azonao atao koa ny mianatra zava-misy an-taonany momba ny fambolena sy fiompiana eo an-toerana.
4. Nosy Museum of Bay Underwater - Ity dia tranom-bakoka tsy manam-paharoa sy miavaka miala ny morontsiraka ao amin'ny nosy Roatán. Mba hahitana hoe inona no tokony hanoloranao azy dia tsy maintsy manidina na manidina eny amin'ny rano mangatsiaka sy ny rano mangatsiaka ao amin'ny Ranomasina Karaiba ianao. Ao anatin'izany, afaka mahita rakitsoratra mahagaga sy artifacts toy ny Galleons Espaniôla, lakana, tavoahangy ary hatramin'ny Mayan fahiny.
5. Galería Nacional de Arte - Notokanana tamin'ny 1996 ny tranombakoka ary noforonina mba hitahiry sy hanehoana ireo zavakanto kanto amin'ny artista eo an-toerana. Ao anatin'izany dia hahita zavatra avy amin'ny zavakanto rupèria andro vitsy talohan'ny nahatongavan'ny Eoropeana, ho an'ny sary sokitra maoderina indrindra. Azonao atao ny mahita azy ao San Pedro Sula.
Musee any El Salvador
Museo de Arte El Salvador. Oisin Prindiville / Flickr / CC 2.0
1. Museo de Arte - Nantsoin'ny mponina hoe Marte izy io ary notokanana tamin'ny taona 2003 ho tranombakoka tsy miankina iray izay ahitana karazany maro ny zavakanto tsara indrindra avy any El Salvador. Azonao atao ny mijery ireo zavakanto izay manomboka ny taonjato faha- 19 ka hatramin'izao. Azoko soso-kevitra ny haka ny fitsidihana fitarihana mba hahafahanao mianatra bebe kokoa momba ireo tapany ao aminy.
2. Museo de la Revolución Salvadoreña - Nosokafana tamin'ny 1992 ny tranombakoka miaraka amin'ny tanjona amin'ny fanomezam-boninahitra ireo mahery fo sy maritiora avy amin'ny ady an-trano 80 taona. Ao amin'ny Perquin, Morazan izy io ary manana efitrano dimy samihafa izay hianaranao momba ny kapa dia miteraka ady, fifanarahana fandriam-pahalemana ary basy.
3. Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzman - Tranom-bakoka taloha izay miverina any amin'ny taona 1883, taorian'izay dia naniry ny hampiseho ny tantara eo an-toerana, ny biolojia ary ny geology ny mpanorina azy. Nifindra tany amin'ny toerana maromaro nandritra ny taona maro izy io. Hatramin'ny farany dia nahita toerana tsara sy maharitra izy tamin'ny taona 2001. Ho hitanao any San Salvador izany.
4. Tin Marín Museo de los Niños - Tin Marin dia toerana mahagaga izay ahafahan'ny ankizy mianatra momba an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fanandramana. Afaka ho tonga mpanamory, mpanao gazety, mpamono afo, ary mahatsapa ny herin'ny zero. Ity dia toerana tsy maintsy hitsidihanao raha mandeha miaraka amin'ny ankizy. Ho hitanao ao San Salvador izany.
5. Tranoben'ny miaramila El Zapote Barracks - Raha ny mikasika ny karazana fifandonana rehetra dia tokony hihaino ny andaniny roa. Izany no antony, raha mitsidika ny Museo de la Revolución ianao dia tokony hitsidika ny tranom-bakoka miaramila. Izany dia hanome anao fahatakarana tsara kokoa ny ady an-trano. Ao San Salvador ihany koa izy io.
Musées ao Nicaragua
1. Museo de la Revolución - Eo amin'ny tanànan'i Leon, any andrefan'ny valan-javaboary. Ao anatin'izany dia hahita rakitra sarimihetsika, lahatsoratra, ary famintinana izay manadihady ny revolisiona. Misy ihany koa ny fampahalalana momba ny zava-nitranga taloha sy taorian'izay. Tsy mahavariana ilay trano fa ny fampahalalana ao anatiny dia tsy misy dikany ho an'ny tantara malemy.
2. Museum of Legends and Traditions (Museo de Tradiciones y Leyendas) - Io tranombakoka io koa dia miorina ao an-tanànan'i Leon. Ny fonja indray dia fonja iray izay nahitana fampijaliana voafonja. Ankehitriny, ireo efitrano tranainy rehetra dia navaozina mba hampiantrano ireo fampiratiana izay milaza aminao ny momba ny fomban-drazana sy ny angano eo an-toerana. Ny antsalAna koa dia manome fampahalalana mikasika ny antony nampiasan'ny voafonja hampijaliana.
3. Museo del Parque Volcán De Masaya - Eo amin'ny foiben'ny Masaya Volcano no misy azy, iray amin'ireo hany manerana izao tontolo izao izay ahafahanao manohy ny lalana mankany amin'ny crater active. Ny fampisehoana ankapobeny momba ity volkano miavaka sy manan-danja ity.
4. Ny National Museum - Io no tranombakoka lehibe indrindra ao amin'ny firenena ary mipetraka ao amin'ny Lapam-panjakana. Niverina tamin'ny 1935 ny tranobe. Efa 50 taona mahery izao no toeran'ny governemanta ao amin'ny firenena. Misy koa ny tranomboky lehibe ao amin'ilay trano.
5. Centro de Arte Fundación Ortiz-Gurdián - Io fototra io dia napetraka tamin'ny taona 1996 avy amin'ny lehiben'ny orinasa tsy miankina toy ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana mba hampiroboroboana ny kolontsaina eo an-toerana. Ny tena zava-dehibe dia ny fampisehoana sary hosodoko avy amin'ireo mpanakanto eto an-toerana ary manohana azy ireo. Mbola misy tranombakoka iray hafa ao an-tanànan'i Leon.
Tapaka: ny Mozea Metropolitan ny Art
Museum Secrets: Ny Tranomboky sy ny Tranombakoka Morgan
Ny Museum Amerikana Afrikana ao amin'ny County Nassau, NY
American Museum of Marine Merchants, Kings Point, NY
10 Zava-niseho nandritra ny fotoam-bahoakan'entana ny diany
Ny Irish Breakfast Roll (sy Breakfast Roll Man)
Ny tsara indrindra: Ny Brooklyn no sarotra indrindra hahazoana trano fisakafoanana
Madrid amin'ny teti-bola
Arizona State Fairgrounds any Phoenix - Sarintany sy ny toro-lalana
Patagonia an-tendrombohitra - fitsangatsanganana & fiantohana Company El Chalten, Patagonia
Fanampiana ara-bola any Washington, DC, MD ary VA
Ahoana ny fampiharana ny karatra NEXUS
Venom One - ekipan'ny ekipa Snakebite Miami
Fomba hanohanana tranokala RV
Jereo ny Top Gay Gay ao Seattle